by Russell Fairley
Shaqada ugu dambeysa ee Z Workstation waxay ku darsataa qalabyada qaar oo ah tartanka-qalabka wax lagu burburiyo.
Doorashada goobta shaqada ee wax soo saarka fiidiyoowga ah ee xirfadlayaasha ah ayaa ah rajo xiiso leh, gaar ahaan marka la tixgelinayo fursadaha la heli karo maalmahaas. Xalalka xawaaraha sare ee xawaaraha sare, xasuusta xasuusta degdegga ah, GPU-ga oo badan, iyo xirmooyin cusub oo albaabbada u furaya qalabyo badan oo xoogan ayaa ah bilowgii sheekada.
Kadib markii la eegayay mishiinnada mashiinka laga yaabo in munaasabada ciyaartoyda waaweyni ay ahayd wakhtigii lagu xallin lahaa xaruntii shaqada ee qeexay awoodda wax soo saarka ee wax soo saarka iyo soo-kabashada shaqada wax soo saarka. Mashiinka aan soo qaadnay wuxuu ahaa shaqada HP Z840.
Sidaa darteed, maxaan u dooraneynaa xaruntan shaqada? Si aan u bilowno, waa inaynu ilaawnaa wax walba oo aan ka ogaanno xarumaha casriga ah ee casriga ah iyo dib u eegista waxa suuqa hadda jira.
Socdaalka Best Buy wuxuu na siinayaa fikrad adag oo ah makiinadaha macaamiisha casriga ah sida ugu fiican. Inta badan, waxaan ku helnay xasuusta 8-12GB, wadooyinka waawayn ee maskaxda leh, iyo baqshiida dekadaha. Dhammaan waxaas oo dhan ku saabsan hareeraha, siin ama qaadid.
Maxay faa'iido u heli karaan lacagtooda?
Ku soo dhaweynta dukaanka Apple wuxuu nagu soo dhaweynayaa qaabka loo qurxiyo. Wixii ku dhowaad toban jibbaar waxaan ka saari karnaa ugu dambeyntii Mac Pro. Isku soo wada duubo 12 shaqeeye, 64GB of RAM, 6k GPU iyo 1TB oo ah xawaaraha sare ee PCIe-ku salaysan, Mac Pro-ga cusub waa mashiinka aadka u culus - iyo doorasho caan ah oo leh faa iido abuur.
Laakiin maxaa dhacaya haddii aan rabno in aan wax badan samaynno? Iyada oo adeegga 4K iyo sare ee fiidiyoowlaha ah uu si dhakhso ah u noqonayo heerarka warshadaha, xirfadlayaasha ka soo jeeda sawirada iyo habdhaqanka sawir-gacmeedyada ayaa waxay dalbanayaan xarumo shaqo oo la socon doona filimka sii koraya. Nasiib darro, taageerayaal badan oo ka mid ah habka farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsan karo ayaa la yaabay meesha laga tago markii Apple uu go'aansaday in uu qaato Mac Pro oo ku saabsan ka bixitaanka qorshaynta, isagoo ku tiirsan xayndaab dibedda ah sida istiraatiijiga ah oo ka soo baxa nidaamyada isku dhafan ee runta ah. Makiinadaha cusub waxay u muuqdeen kuwo wanaagsan oo waxay noqon karaan kuwo si fiican u wanaagsan, laakiin bedelaya GPU ama hagaajinta qayb ahaan waxay u muuqatay mid adag oo qaali ah.
Waxay sidoo kale cusbooneysiiyeen nidaamka si ay ula socdaan warshadaha ay u malaynayeen inay taageerayaan. Sawirada kamaradaha ayaa xargaha ballaaran, sawirro qashin ah. Codsiyada 3D ayaa si xoogan ugu tiirsan awooda CPU iyo awoodda GPU si loo abuuro walxo kor u kaca ah, codsiyada jimicsiga midab leh ayaa kordhay oo la kobciyay.
Si la mid ah si la mid ah Final Cut Pro X ayaa ka tagay fikrado badan oo la yaab leh halkaasoo qaababka ay u baxeen, sidoo kale aaday kanaalka casriyeynta casriga ah.
Siyaabo badan, jilayaasha cusub ee cusub ee loo yaqaan 'Z Workstations' ee laga bilaabo HP halkaa oo ah meesha ugu sareeysa ee Mac Pros - iyo goobaha kale ee ugu sareeya ee kombuyuutarada - dhammaadka, laakiin waxaa loo dhisi karaa si aad u xoog badan oo loo miisaaman karo.
Si aad fikrad u siisid sida maskaxda ah ee HP Z840 uu noqon karo, aynu ka fekerno in heerkulka goobaha shaqo ee pro-firfircooni yahay 12-core processor, 64GB oo xasuusta, iyo in yar ee hababka ballaarinta. A Z840, oo dhinaca kale ah, waxay yeelan kartaa ilaa 44 xabbo, 2TB oo xasuusta iyo ilaa 10 darajo gudaha ah. Toss ee NVIDIA Quadro M5000 GPU oo leh 8GB xusuusta video for qiyaas wanaagsan.
Minaalladu waa wax qurux badan. Ka fogow naqshadeynta madow ee warshadaha casriga ah, qabashada culus oo aad u adag oo furan guddi kooxeedyada si aad u muujiso aragti ah in dhismaha mashiicadan cajiibka ah loo qaaday. Gudaha Z840 waa qalab dhab ah oo qurux badan, oo loogu talagalay inuu u oggolaado si deg deg ah oo fudud loo cusbooneysiiyo. Fiiri waxoogaa dhaw oo taxadar leh faahfaahinta muuqaalkuna waa muuqanayaa - ka baxsan qaybaha ugu sareeya ee Z Workstation waa la isticmaali karaa, gudaha ayaa ku faanaya naqshad la socota acoustics maskaxda ku haysa, sii wadida barnaamijka wax-ka-qabashada ciyaaraha oo bilaash ah.
In kastoo aan wax badan ka ogaanno arintan in dib-u-eegideena soo socota, xayawaanka bahaladani ay aad u xoogan yihiin, ogaanayaan sida loo dhameeyo dhididka ayaa noqon doonta qaybta ugu adag.
Dabcan, waxqabadka Z840 waxaa badanaa lagu qeexay sida loo ogaado. Waxaan ognahay inay suurtagal tahay in lagu daro laba xabbadood oo xayirad xeeyn ah ilaa 44 xabbadood, laakiin mashiinku wuxuu leeyahay waxyaabo qurux badan oo cajiib ah oo ku salaysan xulashooyinka farsamada. Z840 wuxuu leeyahay (tirin) todobo PCIe, ilaa 10 darajo gudaha ah, iyo 16 xargo oo xasuusta ilaa 2TB oo xasuusta. Dhanka dekadaha dibadda, Z waxay leedahay dhejisyo USB ah, SATA iyo SAS, waxayna ku xiran yihiin qalabka Thunderbolt 2 iyo bandhigyada.
Laakiin dhammaantood maahan warbxinta ugu dambeysa. Z840 dhab ahaantii waxaa laga heli karaa suuqa muddo wakhti ah. Qaybaha iyo qaababka wax badan looma baddalin bilihii la soo dhaafay, markaa maxaa ka dhigaya mishiinka noocan oo kale ah sida wax soo saarka iyo hawlaha boostada?
Ku soo dhawow hargabka HP Z Turbo Drive Quad Pro. Maxay, kuu dhihi, waa Z Turbo Drive Quad Pro kaas oo aan ku hadlayo?
Waa hagaag, HP Z Turbo Drive Quad Pro waa ilaa laba terabytes oo qaylinaya, daciifinta xukunka, waxqabadka qafiifinta, oo lagu duubay hal xirmo yar oo aan waxyeello lahayn.
Sidee ayaan u hadleynaa? Sidee loo kordhiyaa xawaaraha akhriska 9GB / s? 5.8GB / s Xawaaraha xawilaadda xaglaha ma aha mid xun. Gaar ahaan waxay tixgelinayaan SATA SSD-da oo ku saleysan 550 MB / s akhris iyo 500MB / s qoritaan.
Dhibaatadani waxtarkeedu waa mid aad u muhiim ah, maadaama ay ugu dambeyntii sii deyneyso ficilada naqshadeynta ee xayiraadda xoqitaanka qashinka markaad isticmaalayso faylasha waaweyn. 4K casriga ah iyo shaqooyinka wanaagsan ee macnihiisu waa inay riixaan oo ay si joogta ah u soo jiidaan faylasha waaweyn, iyo HP waxay ogtahay in qalabka kaydinta lagu sii wadi karo horumarka la arkayay qalab kale sida CPUs iyo GPUs.
Dhaqdhaqaaqa HP Z Turbo Drive Quad Pro waxaa suuro gal ah in ay suurtogeliso naqshad gaar ah. Iyadoo la isticmaalayo xiriirka PCIe, HP wuxuu saarey qalabka wax-qabadka ee SATA. Quad Pro-ga waxay ka kooban yihiin afar naqshadood oo NVMe SSD ah oo ka mid ah kaararka PCIe, oo leh cabbirada 512GB halkii mitir, abuurista xal waxqabad oo shaqeyneysa xarumaha kale ee deg-degga ah ee meeraha ku yaal keliya. Ka fiiri waraaqda cad ee HP-ga ee baabuurka si aad u hesho sawir buuxa ee qalabkan cayaarta.
Taageero loogu talagalay xalkan la keydiyay ee aan la dabooli karin kaliya taageerada HP Z840. Waa walaalo yar, Z440 iyo Z640 waxay kaloo taageeraan HP Z Turbo Drive Quad Pro.
Waxaa suurtagal ah inay tahay waqti fiican si aad uga dhigto mid muhiim ah. Ha u oggolaanin nambarrada nambarku inay kuugu qancinayaan ama kaaga dhicin inaad ka shaqeysid Z Workstation gaar ah. Z440 iyo Z640 waxaa lagu dhejin karaa heer aan wax kuu keeni doonin, laakiin natiijooyinka xoqan, sida Z840 loo dhejin karo ilaa heer yar oo kaliya in la burburiyo xarumaha kale ee shaqada. Tani waa quruxda dhammaan shaqooyinka Z Workstations: waxay runtii yihiin qaar ka mid ah mishiinnada ugu haboon ee suuqa ee maanta.
Waxay kaloo caawisaa, sidoo kale, inaanay kicin doonin studio-daada. Hawlaha Shaqooyinka Z waxaa si xaqiiqo ah u qiimeeya awoodooda.
Bilaabidda Z840 uma baahnid in ay ku kacdo $ 20,000. Inkastoo ay leedahay dabacsanaan lagu dhisi karo xarumaha xarumaha la midka ah ee xarumaha, waxay billaabanaysaa macquul ah $ 2,399. Qiimahaas waxaad guriga ku qaadanaysaa mashiinka 6-taam oo aad u karti leh, wali awooda inuu ka cabsado inta badan mashiinnada wax soo saarkaada.
Laga soo bilaabo halkaas waxaad ku dhisi kartaa wakhti ka dambeeya, amaba caadifadda mashiinka riyooyinkiina ka baxsan albaabada. Iyada oo ku xiran shuruudaha shaqadaada, waxaad awood u yeelan doontaa inaad qeexdo Z840 inay si buuxda u daboolaan oo ay uga sarreyso baahidaada, iyo cusbooneysiinta laga helo Z Turbo Drive Quad Pro, iyo sidoo kale awoodda cajiibka ah ee buuxinta boosaska iyo khadka aadka ayaa ruxruxi kartaa, waxaan mustaqbalka ku xaqiijin doonaa maalgelintaada sanadaha soo socda.
Haddii aad ka werwersantahay mawduucan qosolka ah ee kor u kicinta pixel-ka oo kuleyl iyo kuleyl uugu ridayo miiskaaga Herman Miller, tixgeli fikradda cusub ee HP: Z Cooler. Z Cooler waa xalka qaboojinta loogu talagalay jawiga Z Workstation, hoos u dhigista qaylada ilaa 40%, laakiin iyada oo aan lahayn dhammaan tuubooyinka khatarta ah ee nidaamka qaboojiyaha. Taa bedelkeeda, Z Cooler wuxuu isticmaalaa naqshadeynta HP-ga ah oo leh qolka 3D uumiga ah si loo helo shaqada.
Sidoo kale qiimaha daawashada shabakadda.com waa horudhaca nooca HP Z27x, oo maqaalkani hadda la qoray. Ka dib wadahadal dheer oo ay la yeesheen naqshadayaasha ugu sarreeya ee caalamka, qoraagu wuxuu xayiray mid ka mid ah xayawaankani miisaanka istuudiyaha ee meel ka mid ah aamineed Apple Cinwaanka. Muujintani waxay bedeli doontaa sida dad badan oo loo iibiyo kormeer, sida fekerka ah in ay iibsadaan "shirkadda ugu fiican ee X shirkaddu waa inay bixisaa" maaha mid ku filan shaqadeeda. Bixinta u hoggaansamida qulqulka midabka badan ee la isticmaalo, iyo awood u samaynta midabaynta midabaysan waxay dejisaa sawirada fasalka xirfadlayaasha ah marka laga reebo bandhigyada macaamiilka. Dhammaan waxay kuu ogolaanayaan inaad daawato filimka cusub ee Star Wars si aad u qurux badan, laakiin inaad bixiso wax sax ah, waxaad u baahan tahay muuqaal habboon.
Ka sokow, maxay tahay madadaalo in uu leeyahay goobta shaqada ugu fiican ee adduunka haddii aad doonayso inaad ku xirto telefishinkii hore CRT, had iyo jeer?
Sidaa daraadeed taasi waa inooga soo horjeeda ugu weyn, miisaanka, M mashiinka, HP Z840 Workstation. U hubso inaad sii joogtid maalmaha soo socda, maadaama aan soo dhajineyno dib u eegida M8 ee mashiinka tijaabada ah. Ma ahan inaad ku dhufatid shaki, laakiin haddii aad tahay inaad iibsato ka hor inta aan dib loo eegin waddooyinka, fiiri makiinadan markaad ugaarsato shaqo-abuurka ugu fiican: Qoraalkan ayaa si hoose u eegay fursado badan, Mac iyo PC, labadaba iyo gebi ahaanba caadadiisu, mashiinkaani waa meesha macaan. Waxay isku dari kartaa awooda goob shaqo oo caadi ah oo leh xasillooni iyo taageerid calaamad weyn, waxaanad ku dhejin kartaa wareeg cusub oo ay ku dheehan tahay in dhismayaasha caadada ah aysan ka fikirin.
Waa runtii yaabay.
Kordhinta soo socota: HP Z840 Dib u eegis, Dib u eegida HP Z27x, Ugu Fiican NAB 2016
Amazon Kindle Fire 7-inch 8GB WiFi Tablet PC
Dib u eegid: Wacom Cintiq 21UX Shaashada Interactive Sheeg
ASUS ZenBook 3: Awoodda xidhmo yar
Dhamaan dadka ku saabsan qalabka isha ee iPod
Isticmaalka Microsoft Word for Publishing Masaajidka
Mesh iyo NURBS: Waa maxay Tusaalooyinka 3D ee ugu Fiican daabacaadda 3D?
Sida loo Isticmaalo AirDrop ka soo iPhone
4K ama UltraHD Displays iyo PC
Kusoo iibso Google+ for iPhone, iPod Touch iyo iPad
Ka saar Aragtida Maaskarada ee Dharka Sonkarka Dharka ee CorelDRAW
Sida loo Joojiyo Geo IP Firefox
Akademiyada Art Academy Sketchpad - Wii U Dib u Eegista
Sida loo helo Tumblr Mawduucyada Bilaash ah
Gaabinnada SMS-ga ee caadiga ah
Waa Maxay XNK File?
Tilmaame loogu talagalay Outlook.com adoo isticmaalaya POP ee Barnaamijka Email
Dhaawac 3 Khiyaano - PC
Waa maxay TweetDeck oo kaliya ayaa loogu talagalay Twitter?
Miyay VoIP Marwalba Jirto?